﻿	ဘေကွန် Cheddar အာလူးသုပ် (နွေးသို့မဟုတ်အအေးအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်!) - ချက်ပြုတ်နည်းများ
မီးဖို၌ crispy ကြက်ဆင်ဘေကွန်ချက်ပြုတ်နည်း
အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင် brownies ချိစ်ဒိန်ခဲစာရွက်
ကျွဲရိုင်းတောင်ပံဟင်းနုနွယ်ရွက် artichoke သို့ကျဆင်းလာ
ဘေကွန် Cheddar အာလူးသုပ် (နွေးသို့မဟုတ်အအေးအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်!)
ဤသည်ကျိန်းသေကျွန်မခင်ပွန်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးအာလူးသုပ်ဖြစ်ပါတယ် ... ငါကအများကြီးချက်ပြုတ်နည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လမ်းလျော့နည်း mayo ပါရှိသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကကြိုက်တယ်! ငါပေါ့ပေါ့တန်တန်မုန့်ကိုသုံးလိုက်တယ်။
ဒီအစာကိုမစားခင်ချက်ပြုတ်ပြီးအစာကျွေးနိုင်ပေမယ့် ကြိုတင်၍ ပြုလုပ်လျှင်အအေးမိသည်။
ပူနွေးသောဘေကွန် Cheddar အာလူးသုပ်
ပြင်ဆင်ချိန်၅ မိနစ်များ ချက်ပြုတ်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်နှစ်ဆယ် မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၆ စားသုံးခြင်း စာရေးသူHolly Nilsson ကလေးငယ်များအတွက်အာလူး၊ cheddar ဒိန်ခဲ၊ ဘေကွန်နှင့်အိမ်တွင်းတစ်သင်းလုံးကကစားသမားများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလွန်လွယ်ကူသောအရသာရှိသည့်အာလူးသုပ်! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢၇ ခွက် ကလေးအာလူး ပေါ်အရေပြားတစ်ဝက်ကုန်တယ်
▢¼ ခွက် parsley အရွက် လတ်ဆတ်ကုန်တယ်
▢နှစ် ကြက်သွန်အစိမ်း ပါးလွှာသောအချပ်
▢1 ½ ခွက် တရုတ်နံနံ ကုန်တယ်
▢၄ ဥ မာကျောလှသည်။
▢၁ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း သံပုရာ - ငရုတ်ကောင်းရာသီ
▢၆ ဇွန်း မေonnaise
▢၁ ခွက် ဒိန်ချဥ် (ငါအလင်းသုံးတယ်)
▢၈ ချပ် ဘေကွန် ပြတ်သားပြတ်သား, ချက်ပြုတ်
နူးညံ့သည့်အထိအာလူးများကို (အနည်းဆုံး ၁၀ မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်) ပြုတ်ပါ။ အာလူးတွေကိုညှစ်ပြီးနွေးထွေးတဲ့အထိထိုင်ပါစေ။
သော့ချက်စာလုံးအာလူးသုပ် သင်တန်းအသုပ်, Side Dish ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။